Habibiana mahatsiravina tany Imerintsiatosika: telo mianaka indray maty voatsatoka antsy | NewsMada
Habibiana mahatsiravina tany Imerintsiatosika: telo mianaka indray maty voatsatoka antsy
Faty telo mihosin-dra, miampatra tao amin’ny efitra nisy azy ireo. Maty voatsatoka antsy, novonoin’ny jiolahy nanafika azy ireo, omaly, tao Mamoladahy Imerintsiatosika izy mivady kely manodidina ny 30 taona sy ny zanany vao dimy taona monja.
Tena efa tsy milamina intsony ny tany, mandry tsy lavoloha ny vahoaka, tsisy vidiny intsony ny aina! Telo mianaka indray maty notsindronin’ny olon-dratsy antsy, tany Mamoladahy Imerintsiatosika, omaly alina. Rangahy voan’ny antsy teo amin’ny fony, ramatoa koa torak’izany, ary ilay zaza teo amin’ny tendany. Efa ny maraina tamin’ny 8 ora teo vao hita faty izy telo mianaka. Mpiasan’izy ireo hamonjy asa maraina no nahita izany ary nampilaza ny zandary avy hatrany. Tonga teny an-toerana ny zandary sy ny polisy ary ny dokotera nanao ny fizahana. Hita tamin’izany fa novakina ny trano, ka very ny ecran plat iray sy ordinatera miisa roa tao amin’izy ireo. Marihina fa manana Cyber izy mivady ireo. Nisy coffre tao an-toerana ka novahana tamin’ny fanalahidy izany fa tsy mba novakina.
Araka ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana, tokony ho tamin’ny 12 ora alina tany no maty ilay raim-pianakaviana. Adiny iray taty aoriana kosa no maty ilay ramatoa raha adiny roa taorian’ireo no namoy ny ainy ilay zaza. Araka ny tombatomban’ny dokotera nanao ny fizahana ny razana, ireo ora ireo. ”Manodidina ny tamin’ny 12 ora alina tany ny fanafihana no nitranga. Tsy nisy naheno mihitsy ny teo amin’ny tanàna nandritra izany, kanefa efa mandeha ny fanadihadiana manodidina ity vonoan’olona mahatsiravina ity”, hoy ny fanazavan’ny mpitandro filaminana.
Zanany lahy sisa velona
Araka ny fanamarihana ihany, zanak’izy mivady lahy kely iray sisa velona tamin’izao fanafihana izao. Tsy tao an-toerana ilay zaza lahy fa miala sasatra any Fandriana, ka izay no nahavotra azy. Tsy nahateny ny tao Imerintsiatosika iray vohitra. Fanafihana sa vonoan’olona niniana natao? Ny tohin’ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana no ahalalana izany. Ny polisy no mandray an-tanana ny raharaha amin’izao.
Tranga miseho efa manerana ny Nosy mihitsy ny habibiana tahaka izao. Tsy milamina ny tany. Akaiky ny fifidianana ka mety misy ifandraisany amin’izany ny zava-miseho? Milokaloka ireo kandida efa naka bahana fa hiady amin’ny tsy fandriampahalemana. Miandry izay fepetra raisin’ny mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny rehetra manolona izao firongatry ny asa ratsy izao.